Ny LG Stylo 5 dia hita talohan'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy Androidsis
Ny LG Stylo 5 dia hita talohan'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy
LG dia efa hirotsaka an-tsehatra amin'ny vaovao vaovao tsy ho ela, iray izay misy ifandraisany amin'ny fandefasana smartphone iray ho avy. Io no antsoina LG Stylo 5 ary manakaiky ny lasa ofisialy hanamaivanana ny Fomba 4 navoaka tamin'ny herintaona.
Ny fitaovana dia tsy nampiseho betsaka ny tenany tamin'ny famoahana, toy ny mahazatra ny telefaona hafa alohan'ny hahatongavany amin'ny tsena, saingy hafa izao, satria ny sary nadika vaovao efa voasivana Manome antsika hevitra mazava tsara momba ny zavatra nomanin'ny orinasa Koreana Tatsimo ho antsika amin'ity terminal ity izy ireo. Andao hojerena!
Toy izao ny endrika LG Stylo 5
2 / 2 pic.twitter.com/GE61HJavXi
- Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) Jona 8, 2019
Ireo fandikan-teny izay asehonay ary navoakan'i @ Sudhanshu1414 ao amin'ny Twitter, avy amin'ny tranony na lamba firakofana izy ireo. Ireo kosa dia mampiseho ny Stylo 5 ao anatiny, manome antsipiriany ny vatany feno ary maneho izany manaraka ny tsipika mitovy amin'ny Stylo 4.
Araka ny azontsika ankasitrahana, ny telefaona dia misy fampisehoana 18: 9 misy sisiny somary voatonona. Ny sisiny roa amin'ny tontonana dia tsy matevina loatra; raha ny marina, izy ireo dia avy amin'ny hatevin'ny mahazatra izay azo tanterahina amin'ny elanelam-potoana ankehitriny. Mandritra izany fotoana izany, raha ny momba ny bezela ambony sy ambany, dia miova kely ny raharaha, satria eo no ahitantsika toerana somary be, na dia tsy mandiso fanantenana aza.
Ny efijery Stylo 5 dia tsy misy loaka na karazana loaka. Tsy milaza akory izany fa ho avy amin'ny fakan-tsarimihetsika pop-up na rotary, satria hitanao ny sensor amin'ny sary eo amin'ny bezel ambony. Noho izany dia mahita telefaona manana endrika maotina sy miverimberina isika.
Ny LG Q60 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Raha ny momba ny lamosiny, any amin'ny faritra afovoany ambony no sendra anay a fakan-tsary miverina miverina mitsangana ary mizara flash LED. Eo amin'ny farany ambany dia misy ny sary famantarana ny orinasa.
Ary farany, ny bokotra herinaratra / hidin-trano sy feom-peo dia miorina amin'ny sisiny, ary ny mikrô, ny mpandahateny, ny port USB-C ary ny jack 3.5mm dia hita eo amin'ny sisiny ambany. Mbola fantatra hatrany ny mombamomba azy, na dia antenainay fa hifanaraka amin'ny elanelam-potoana aza izy ireo. Amin'izao aloha dia izao ihany no ananantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny LG Stylo 5 dia hita talohan'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy
Nokia dia handefa ireo findainy 5G roa voalohany amin'ity volana manaraka ity